DABAGAL CUSUB: DP WORLD ma Berbera kaliya ayaa laga joojiyey mise guud ahaan Soomaaliya, D/Gobaleedyadase maxaa la gudboon? – Puntlandtimes
DABAGAL CUSUB: DP WORLD ma Berbera kaliya ayaa laga joojiyey mise guud ahaan Soomaaliya, D/Gobaleedyadase maxaa la gudboon?
MUQDISHO(P-TIMES)- Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay isku raacay in gabi ahaanba dalka laga mamnuuco shirkada DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, waxaana la joojiyey gabi ahaanba heshiisyada ay kula jirtay dawlad gobaleedyada dalka oo la buriyey, wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo baxayey warar kala duwan oo ay dadweynuhu is weydiinayaan.
Majirto cid katirsan dawlad gobaleedyada qeybta ah dawladda Faderaalka Soomaaliya oo ilaa hadda ka hadlay arrimaha DP WORLD, waxaana kaliya oo kahadashay Somaliland oo cadeysay doorkeedu in uu ka madax banaan yahay qaraarka baarlamaanka Muqdisho.
Falanqeeyaasha Siyaasadeed ayaa aad u hadal haya wararka kusaabsan go`aanka ay qaateen baarlamaanka Faderaalka, waxaana lays weydiinayaa Dekeda Boosaaso ee Puntland oo kamid ahayd meelaha ay maamusho shirkada Shisheeye, maka mid noqon doontaa goobaha laga ceyrinayo, maadaama Puntland ay aqoonsan tahay sharciyadda baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Goobaha bulshadu iskugu timaado, baraha bulshadu ku xariirto ee Facebook iyo Twitter-ka ayaa aad laysku weydiinayaa dhacdadan, waxaana su`aalaha qeybaha ugu horeeya ka galaya saameynta xeerka baarlamaanka iyo sidda uga dhaqan galayo gudaha dalka.
Ma jirto cid katirsan Puntland oo ilaa hadda ka hadashay ama soo qaaday qaraarka la gaaray, marka laga reebo Mudane katirsan baarlamanka Puntland oo taageeray sharciyada hadda soo baxday, waxaase horey heshiiska DP WORLD u ansixiyey baarlamaanka maamulkaas.
Puntlandtimes.com oo la xariirtay xubno ay ka mid yihiin Wasiirka Dekedaha, Gaadiidka Badda & Dambiyada ka dhaca baddaha Puntland Siciid Maxamed Raage ayuu sheegay in aysan ka hadleynin arrimahaas, sidaas oo kalena xubno katirsan laamaha Sharci dajinta ayaa u sheegay Warsidaha in aysan waqtigan waxba arrimahan ka hadli doonin.
Caasumada Soomaaliya ee Muqdisho oo ah halka lagu gaaray qaraarkan, waxaa kusugnaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo furitaankii kalfadhiga 3aad ee baarlamaanka Faderaalka ka sheegay in Madax banaanida iyo Qaranimada Soomaaliya la dhawro oo ay taageersan yihiin.
Xog kale oo banaanka u soo baxaysa ayaa sheegaya in ay Madaxda dawladda Faderaalka iyo Dawlad gobaleedyada taageersan dawladdu horey uga wada hadleen arrimaha faragalinta qaawan ee wadamada Shisheeye, gaar ahaana Imaaraatka Carabta oo taageero wanaagsan siiya dawlad gobaleedyada qaarkood, gaar ahaana Jubbaland, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Somaliland oo uu xataa ka taageeray dhinaca dhismaha ciidamadooda.
Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada Soomaaliya waxay kal hore wadajir u diideen sidii ay dawladda Faderaalka u maareysay xaaladdii wadamada Khaliijka oo ay la safteen wadamada Imaaraatka Carabta & Sacuudi Careebiya, halka faderaalkuna qaatay dhexdhexaadnimo Carbeed, laakiin daganaansho la’aan siyaasadeed oo xoog badan ayay horseeday arrintaas, taas oo ilaa maanta taagan.
20 March 2018 magaalada Garoowe ee Puntland waxaa ku casuman Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle & Galmudug, waxayna dood ka yeelan doonaan arrimahan cusub iyo qorshahoodii hore u dagsanaa oo ay ku jiraan qodobo ku saabsan hanaanka doorashooyinka dalka ee dhacaya 2020-ka.
Berbera oo keli ah arrintu ma aha, ee reer Berbera iyagaa is waalaya. arrintu waa Somaliya oo dhan, dubeyna wey ka baxeysaa, dekedehaas, puntland waa in ay si deg dega u Cayrisaa, dadkaan. la raacaa go,aanka Dowlada Federaalka ah.
Berbera oo keli ah arrintu ma aha, ee reer Berbera iyagaa is waalaya. arrintu waa Somaliya oo dhan, dubeyna wey ka baxeysaa, dekedehaas, puntland waa in ay si deg dega u Cayrisaa, dadkaan. la raacaa go,aanka Dowlada Federaalka ah. maxaa dhacey ma beenbaan sheegey?
Baarlamanka somaliya go asnada ay gaareen kama aaysan fiirsan sidaan qiyaasaayo waxa kasanbeeya dowlada japuti iyo qader in wadanka laga mamnuuco shirkada dpw waa arin qaldan in dakada xamar iyo garoonka lugu wareejiyo turkey oo layiraahdo wadanka intiisa kale yasnan horumar laga sameen waa fikir qaldan anaga ethopian diidaneen ee ma aanan diidin maalgashi muqdisho waxkastoo somali loogu deeqo masoo dhaafaan turkeyga iyo qader meel aanan muqdisho aheen mashaariic maka sameeyaan marka aniga waxaan u arkas xillibanada xamar joogo ineesan ogeen waxa jira waa dad tooda mooye cidna dan kakaheen puntland waa ineey ka hadashaa una sheegtaa dowlada taavta daran ineeysan xukumin dalka
Ama sida ninkan mohamud ayaa loo hadlaa ama waa layska aamusaa. midda kale dp world berbera way joogaysaa kana shaqaynaysaa berberana dadkeedii baa ka taliya cidina waxba ka weydiin mayso dawlad Ku sheegta fadhiidka ah ee xamar aan dhaafsiisnayn kkkkk.